mairie-antananarivo – Boriboritany Voalohany : Manarintsoa Anatihazo
Niaraka nanadio ireo lakan-drano ny kaominina, ny RF2 ary ireo association izay mpitantana fotodrafitr’asa
Mafy ny asa fanadiovana ireo lakan-drano madinika tao amin’ny Fokontany Manarintsoa Anatihazo ny Alatsinainy 4 Desambra 2017. Raha araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Boriboritany Voalohany dia tena feno fako sy maloto avy any an-tokantranon’ny mponina ny lakan-drano. Raha ny tokony ho izy hoy hatrany ity tompon’andraikitra ity dia anjaran’ny fokontany sy ireo mponina tanteraka ny manadio itony lakan-drano madinika itony kanefa noho ny habetsahan’ny loto izay tena diso tafahoatra dia tsy maintsy midina manao fanadiovana faobe toy izao ny Kaominina Antananarivo Renivohitra mba ho fisorohana ny fiakaran’ny rano rehefa fotoam-pahavaratra toy izao.
Tsara marihana ihany koa anefa fa misy foana ny fanadiovana lakan-drano toy izao teto anivon’ity fokontany ity kanefa na dia eo aza izany dia mbola hita fa tena manahirana hatrany ny fanadiovana teny an-toerana.
Tsy kivy anefa ireo mpiasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra fa mbola manohy ny asany hatrany. Ny Alarobia 6 Desambra 2017 dia hitohy eny Ampefiloha Cité indray ny fanadiovana ireo lakan-drano madinika any anaty fokontany.